အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖန်တီးပေးခြင်း | Ar Yone Oo
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖန်တီးပေးခြင်း
တွန်းဇံမြို့နယ်​သည်​ ချင်းပြည်​နယ်​၏ ​မြောက်​ဖက်​ပိုင်းစွန်းတွင်​တည်​ရှိပြီး အခြား​သော ​ဒေသများထက်​ပိုမို၍​ဝေးလံသသည့်အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲခြင်းများကြောင့် ​ဆေးရုံများ ၊ ကျောင်းများ ၊ ​ဈေးကွက်​များသို့သွားနိုင်​ရန်အတွက် အခွင့်​အလမ်းနည်းပါးသည်။ ထို့ပြင်​ လူမှု​ရေး ၊ စီးပွား​ရေး အခန်းကဏ္ဍတွင်​ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​မှုများနည်းပါး​သေးသည်​။ တွန်းဇံမြို့ရှိ​ကျေးရွာများသည်​ပြန့်​ကျဲလျက်​ရှိပြီး လူဦး​ရေးမှာလဲ နည်းပါးသည်​။ တွန်းဇံမြို့နယ်​သည်​ အိမ်​​ခြေ​ပေါင်း ၅၁၀၀ ရှိပြီး လူဦး​ရေစုစု​ပေါင်း ၃၂၄၀၀ ရှိသည်​။
ချင်းလူမျိုးများသည်​ ဘိုး​ဘေးဘီဘင်​လက်​ထက်​ကတည်းကပင်​ ​တောင်​ယာစိုက်​ပျိုးခြင်းအလုပ်​ကို လုပ်​ကိုင်​ခဲ့ကြသည်​။ ယခင်​အချိန်​များတွင်​ ​ရွှေ့​ပြောင်းစိုက်​ပျိုးခြင်းများအတွက်​ သစ်​​တောများ ၊ ​မြေသြဇာများ ၊ လုံ​လောက်​​ကောင်းမွန်​သည်​။ သို့​သော်​ ယခုနှစ်​များတွင်​ လူဦး​ရေမှာ ယခင်​ထက်​တိုးပွားလာမှုများ​ကြောင့်​ စိုက်​ပျိုးမှုများလုပ်​ရာတွင်​ သစ်​​တောများပြုန်းတီးလာသည့်​အပြင်​ ​မြေဆီလွှာတိုက်​စားမှုများဖြစ်​​ပေါ်လာသည်​။ ရလဒ်​အ​နေဖြင့်​ ​နောက်​ပိုင်းတွင်​ရာသီဥတုများ​ဖောက်​ပြန်​​ပြောင်းလဲလာသည်​။ ကွန်​တိုစိုက်​ပျိုး​ရေးစနစ်​ နှင့်​ ​တောင်​​စောင်းစိုက်​ပျိုး​ရေးစနစ်​တို့သည်​​ရွှေ့​ပြောင်း​တောင်​ယာစနစ်​မှ အမြဲတမ်းစိုက်​ပျိုး​ရေးစနစ်​သို့ ကူး​ပြောင်းနိုင်​ရန်​​ကောင်းမွန်​​သော စနစ်​ဖြစ်​​သော်​လည်း နည်းပညာနဲ့​ငွေ​ကြေးအရင်းအနီးမလုံ​လောက်​ခြင်းသည်​မိရိုးဖလာမှ ပိုမို​ကောင်းမွန်​​သော နည်းပညာအသုံးပြုရန်​အတွက်​ အဟန့်​အတား ဖြစ်​​စေသည်​။
အရုဏ်ဦးလူမှုဖွံဖြိုး​ရေးအသင်းသည်​ ကမ္ဘာ့ စားနပ်​ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်း ( UNWFP) ၏ ​ထောက်​ပံ့မှုဖြင့်​ ချင်းပြည်​နယ်​ ၊ တွန်းဇံမြို့အတွင်းရှိ ​ကျေးရွာ​ပေါင်း( ၇၈ ) ရွာတွင်​အသက်​​မွေးဝမ်း​ကြောင်းနှင့်​ ဆက်​စပ်​သည့်​ပိုင်​ဆိုင်​မှုများ ဖန်​တီးလုပ်​​ဆောင်​ခြင်းအားဖြင့်​စားနပ်​ရိက္ခာဖူလုံမှုတိုးမြင့်​လာ​စေရန်​ ၂၀၁၄ ခုနှစ်​မှစတင်​၍ လုပ်​ငန်းများ ​ကောင်​ထည်​​ဖော်​​ဆောင်​ရွက်​ခဲ့သည်​။ ဤစီမံကိန်း၏ ရည်​ရွယ်​ချက်​မှာ စားနပ်​ရိက္ခာ ဖူလုံရန်​နှင့်​ မိရိုးဖလာ​တောင်​ယာ လုပ်​ကိုင်​ခဲ့​သော အစဉ်​အလာမှ ပိုမို​ကောင်းမွန်​​သော နည်းပညာအသုံးပြုရန်​ရည်​ရွယ်​သည်​။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​အလွန်​ထိခိုက်​လွယ်​ အိမ်​​ထောင်​စု​ပေါင်း၅၇၇၇ အိမ်​​ထောင်​စုမှမိသားစုဦး​ရေ​ပေါင်း ၃၄၅၃၈ ဦးအား ​ငွေသားစုစု​ပေါင်း ကျပ် ၁၆၈,၃၅၃,၀၇၅ နှင့်​ အစားအစာ ၁၇၂၉၈.၃၈ မက်​ထရစ်​တန်​ချိန်​များကို လုပ်​အားနှင့်​​ငွေလဲလှယ်​ခြင်းနှင့်​ အစားအစာလဲလှယ်​ခြင်း အစီအစဉ်​ဖြင့်​တိုက်​ရိုက်​အကျိုးခံစားခွင့်​ရကြပြီး ​တောင်​ယာ​မြေနှင့်​ လယ်​ယာ​မြေဧရိယာ ၃၃၈.၅၅၁ ဟတ်​တာနှင့်​ ၂၆.၇ ကီလိုမီတာရှိ​သော လယ်​​ရေတွင်း​မြောင်းများကို ​ဖော်​​ဆောင်​​ပေးနိုင်​ခဲ့သည်​။
စုစုပေါင်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားသည့် မိသားစုအရေအတွက် (Cumulative)
စုစုပေါင်း လူဦးရေ (Cumulative) လက်ငင်းရလဒ်/ အောင်မြင်မှုရလဒ် အစားအစာ (မက်ထရစ်တန်ချိန်) ငွေသား (ကျပ်)
1. စိုက်ပျိုးမြေပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ၁၁၂၁ ၇၃၉၅ ၂၃၅.၃၉ ဟက်တာ ၃၄၆.၁၆၃ ၈၀,၀၇၄,၅၇၅
၁၈၆၀ ၁၁၄၂၃ ၁၀၃.၁၆၁ ဟက်တာ ၁၂၂.၄၅၉ ၈၁,၅၉၂,၅၀၀
3. လယ်ရေသွယ်မြောင်း/ လယ်ရေသွင်းမြောင်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၂၃၂ ၁၄၉၂ ၂၆.၇ ကီလိုမီတာ ၁၆,၀၉၀.၆၅၉ ၆,၆၈၆,၀၀၀
သဘာဝဘေးဒဏ်တုံပြန်မှုအစီအစဉ် (အစားအစာ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခြင်း)
၇၅၀ ၄၃၆၁ ၀ ၅၉.၇၃၆ ၀
၅. သဘာဝဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ် (အစားအစာ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခြင်း) ၁၈၁၄ ၉၈၆၇ ၀ ၆၇၉.၃၆၄ ၀
Livelihood and Food Security Projects
သဘာဝဘေးဒဏ်ခံအုပ်စုများ၏ ရေရှည်ခိုင်မြဲသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဂေဟဗေဒ
သဘာဝ​ဘေးဒဏ်​ခံ​အုပ်​စုများ၏ ခံနိူင်ရည်​ အားကောင်း​လာစေခြင်း (STRONG)
အခန်း C-1၊ ပြည်ရိပ်သာကွန်ဒို၊ No. 499-A၊ ပြည်ရိပ်သာလမ်း၊
ရပ်ကွက် ၈၊ ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်